KUQHUME isililo enkantolo kaMantshi yaseMgungundlovu ngesikhathi kuvela owesilisa osolwa ngokugwaza abulale ugogo wakhe wadla izicubu zakhe endaweni yakaDambuza.
UMnu Simphiwe Ndlela (41) uvele okokuqala enkantolo ngoLwesibili mhla zili-12 kuNhlolanja (February) nalapho kade ebhekene khona necala lokubulala ugogo wakhe uNkk Judith Ndlela (92) kodwa icala lakhe lahlehliselwa umhla zingama-20 kuNhlolanja ukuze ezofaka isicelo sebheyili kuphinde kuqinisekiswe nekheli lapho ehlala khona nokuthi awekho yini amacala ake amlahla ngaphambili.
Ugogo uNdlela wagwazwa ngoLwesine olwedlule mhla ziyi-7 kuNhlolanja (February) nokuthiwa wagwaza umzukulu kubuka amanye amalunga omndeni kanye nomphakathi.
Ngokuthola kwe-Echo ngelinye ilunga lo mndeni elalikhona ngesikhathi kuqala sonke lesi sigameko uNksz Thandeka Ndlela uthe inkinga yaqala ngesikhathi zehora lesibili ezintathakusa ngoLwesine.
Uthe yena wayelele nogogo wakhe ngesikhathi bezwa umzukulu egijima ezoshaya ngamandla isivalo salapho belele khona nogogo .
“Njalo uma silala nogogo siyawuvala umnyango siwukhiye. Ngesikhathi uSimphiwe eloku eqhubeka eshaye isivalo ngamandla kungathi ufuna ukusibulala ugogo wavele wathi angiwuvule umnyango ngoba kuzogcina sekufe isivalo. Wangena ekamelweni silele nogogo ephethe imibese emithathu nobhushu wafike wasizungeza wabe esephuma futhi eya egumbini lakhe.
“Wabuya esehamba ecakaza impepho esuka egumbini lakhe nasephaseji waze wayofika egumbini lapho silala khona nogogo. Wazama ukushisa impepho kodwa yangavutha ngenxa yokuthi wayenothi olulodwa[lukamentshisi] kuphela. Ngemuva kwaloko waqala wakhuluma empephweni aze aneke ngisho izandla kodwa izwi lingaphumi kodwa ubona ukuthi into ayikhulumayo ijulile,” kubeka yena.
Uthe ngesikhathi esebona loku wagijima wafonela u-anti wakhe ohlala eMbali ngoba wayezitshela ukuthi usevukwe ukugula kwakhe njengoba ayeke wahluhlwa ukugula ngekhanda ngaphambilini.
“Bafika o-anti ekuseni bamubuza ukuthi kwenze njani kodwa waqhubeka wakhuluma empepheni. Ubaba wakhe wazama ukumfutha ngesisi esikhalisa unyembezi(paper spray) ngoba ezitshela ukuthi uzoyeka yonke lento ayenzayo kodwa ayizange nje ize sisebenze.Ngavusa ugogo ngamugqokisa ngamubeka kusofa sekuyisekuseni ngezikhathi zehora lesikhombisa ekuseni ngabe sengiyahamba ngiyomphekela iphalishi ekhishini.
“Ngabona uSimphiwe ephuma ngejubane endlini esephethe umbese esingawazi ukuthi wawuthathaphi ngoba yonke sasesiyifihlile.Ngathi ngisanakile ngezwa ugogo esekhala ethi ‘Waze wangigwaza Simphiwe kulungile uma ngabe ngibulawa uwena.’ Ngahayiza ngaphumela emnyango ngabiza abantu sabuya uSimphiwe esewuvalile umnyango wagwaza ugogo waze washona wamusika nezicubu zakhe zomzimba,” kubeka yena.
Lo mndeni uveze ukuthi ugogo ubezwana kakhulu nomzukulu wakhe kanti kwesinye isikhathi bebeze bahlale bobabili uma kungekho muntu.
UMnu Shakes Cele noyilunga lomndeni uthe into eyenzeka ngoLwesine yimbi kakhulu kanti futhi bewumndeni abazi ukuthi uSimphiwe wayengenwe yini.
Uthe okubuhlungu kakhulu ukuthi bafonela amaphoyisa izikhathi eziningi engafiki baze baziyela khona batshelwa ukuthi asephumile kodwa bathi uma befika ekhaya bathola ukuthi awekho.
“Sibuhlungu kakhulu ngalesi sigameko esehla layikhaya.Indlela ayeyiyona uSimphiwe wayengabambeki ngoba ngisho amaphoyisa esefikile kwaba umzukuzuku nakuwona ukuthi amunqobe. Sisadidekile nje ukuthi kwenzakaleni ukuthi uzengaze enze into ebuhlungu kangaka. Siyazi ukuthi ngonyaka wezi-2016 wake waba nenkinga yokugula ngekhanda kodwa kwabe sekuthiwa akayeke uphuzo oludakayo ngoba engathi ilona elalivusa ukugula. Kumele silandelele-ke ukuthi kungabe ubesebuyelile yini ophuzweni oludakayo,” kubeka yena.
Ngesikhathi kwenzeka sonke lesi sigameko amalunga omphakathi nabanye abasebefikile bazama ukumhlenga ugogo ngokuthi bazame ukushaya uSimphiwe ukuze ezomyeka kodwa kwanhlanga zimuka nomoya njengoba ayengezwa lutho.
Leli cala belihanjelwe nanguNgqongqonshe wezeMpilo esiFundazweni saKwaZulu-Natal uDkt Sbongiseni Dhlomo.Ekhuluma nabezindaba ngaphandle kwenkantolo uDkt Dhlomo uthe bebeloku belulandela lolu daba seloku lwenzeka.
Uthe umsolwa ubelaliswe kwezinye izibhedlela zikahulumeni ngaphambi kokuba avele enkantolo. LUYAQHUBEKA EKHASINI LESI 3
“Ngicele odokotela ukuba bathathe amagazi akhe ukuze sizothola ukuthi lomuntu wayekoluphi uhlobo lwesidakamizwa.Akekho umuntu ongenza ngelendlela enze ngayo.Angeke kuze kube isenzo somuntu ophilayo ukuthi abulale umuntu aqede adle nezicubu zakhe. Sijabulile ke ukuthi odokotela bavumile ukuthi bazosisiza sesilindele imiphumela.
“Sijabulile ukuthi umsolwa ugcinwe ngaphakathi.Sicabanga ukuthi lokho kuyinto elungile ngoba umphakathi ngaphandle udiniwe ngakho ke impilo yakhe isengcupheni.Ukumgcina ezitokisini kuyinto elungile,” kubeka yena. ngoba